विदेशबाट आउनेको जानकारी दिनुस्, पाँच... :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
विदेशबाट आउनेको जानकारी दिनुस्, पाँच हजार लिनुस्!
तस्वीर स्रोत: अध्यक्ष असिम राईको फेसबुकबाट।
विदेशबाट गाउँमा आएर वडामा जानकारी दिनुभएको छैन? त्यसो हो भने छिट्टै वडाको सम्पर्कमा पुग्नुस्।
विदेशबाट आएका पाँच जनामा कोरोनाभाइरस पोजेटिभ देखिएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कडाइ गरेका छन्। हालसालै विदेशबाट आएकाहरू निगरानीमा छन्। उनीहरूको विवरण संकलन हुँदैछ।
विदेशबाट आएर विनाजानकारी घरमै बसिराख्ने प्रवृत्ति बढेपछि प्रदेश नम्बर १ को सोलुखुम्बुस्थित थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले नयाँ उपाय निकालेको छ।
विदेशबाट आएर घरमै बस्नेहरूको जानकारी गाउँपालिकामा दिनेलाई पाँच हजार रूपैंयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेर।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै विदेशबाट आएकाहरूको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन ताकेता गरिरहेको छ।
गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र आफ्ना कर्मचारी परिचालन गरेर विवरण संकलन गर्दैछ। तर विदेशबाट आएकाहरू सम्पर्कमा नआएपछि गाउँपालिकाले गत साता बैठक गरेर पुरस्कार दिने निर्णय गर्नुपरेको हो।
‘विदेशबाट आएर गाउँघरमा लुकेर बसेको कोही छ र त्यो जानकारी कसैले गाउँपालिकामा दियो भने उसलाई पाँच हजार रूपैंयाँ पुरस्कार दिने निर्णय भएको छ,’ गाउँपालिका उपप्रमुख सबिता राईले सेतोपाटीसँग भनिन्।
गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको साता दिनमै विदेशबाट हालै आएका छ जना सम्पर्कमा आएका छन्। ‘उहाँहरू आफैं गाउँपालिकाको सम्पर्कमा आउनुभएको हो,’ उनले भनिन्, ‘पुरस्कार लिने गरी कसैले खबर गरेर होइन।’
गाउँपालिकाले गरेको निर्णयमा ‘नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिएपछि गाउँपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न माध्यमबाट आउनेहरूको सूचना गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने पहिलो व्यक्तिलाई पाँच हजार रूपैंयाँ उपलब्ध गराउने अध्यक्षस्तरको निर्णयलाई अनुमोदन गरियो’ भन्ने उल्लेख छ।
विदेशबाट आउनेहरूको संख्या अझै धेरै भएको हुनसक्ने भन्दै पत्ता लगाउन पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको उनले बताइन्। विदेशबाट आएकाहरूलाई कोरोना भाइरस लागे/नलागेको पत्ता लगाउने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
‘विदेशबाट आएकाहरूलाई घरमै बस्न भनेका छौं। चिकित्सक र ल्यावका कर्मचारी आउनेवित्तिकै स्वाव परीक्षणका लागि धरानमा पठाउँछौं,’ उनले भनिन्।
जनप्रतिनिधिले प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारीको सहयोगमा गाउँपालिकाभित्र विदेशबाट आएर कोही सम्पर्कविना बसिरहेको छ कि भन्ने निगरानी गरिरहेको पनि उनले बताइन्।
‘गाउँपालिकाभित्र कोरोनाको संक्रमण नभित्रियोस् भनेर यस्ता उपाय निकाल्नुपरेको हो,’ उनले भनिन्। गाउँपालिकाले आफ्ना सबै वडाका गाउँमा कोरोना सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
गाउँपालिकाले घोषणा गर्‍यो राहत
दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गरिरहेकाहरूलाई गाउँपालिकाले खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ। ‘मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने घरपरिवारलाई एक बोरा चामल, पाँच केजी दाल, एक लिटर खाने तेल, एक केजी नुन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ,’ गाउँपालिकाले गरेको निर्णयमा भनिएको छ।
राहत लिन सम्बन्धित व्यक्तिले वडा कार्यालयमा निवेदन वा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय समितिले निवेदन अध्ययन गरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर हो भन्ने पहिचान गरेर राहत दिन सक्नेछन्। ‘वडाको सम्बन्धित पसलले तोकिएको खाद्यान्नलगायत सामग्री मजदुरलाई उपलब्ध गराउने र त्यसको भुक्तानी गाउँपालिकाले गर्ने’ निर्णय भएको हो।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १८, २०७६, १७:०२:००